GNOME 42 ichaunza inovandudzwa tema tema | Linux Vakapindwa muropa
Inotevera-gen mapakeji ane masimba avo. Pakati pavo, ini ndaizoratidza kuti vanogona kushanda pane chero kugoverwa kweLinux uye kuti vane zvese zvinodiwa, kusanganisira kutsamira, kuti vashande mushure mekumisikidzwa. Chinhu chakashata ndechekuti ivo havaremekedze zvimwe zvinhu, sekugadzirwa kwedesktop yedu. Kana isu tavhura imwe yeaya mafomu, isu tinowanzoona chimwe chinhu chiri kunze kwetune, kunyangwe izvi zvinoenderana nedesktop mavakange vachifunga panguva yekuzvigadzira, asi GNOME 42 Gadzirira chimwe chinhu chinodzikisira kunzwa kwekuona kushomeka kwekusagadzikana zvishoma.
GNOME 41 Yakaburitswa asingasviki mavhiki maviri apfuura, uye izvi zvinoreva kuti kuchine mwedzi mitanhatu kuti isati yasunungurwa vhezheni inotevera, asi zvakare kuti isu ticha tanga kuziva ruzivo nezve GNOME 42. Sezvatinoverenga ichi chinyorwa naAlex Mikhaylenko, iyo inotevera vhezheni yeGNOME inosanganisira yakasarudzika dhizaini sisitimu yese.
Nyowani yerima dhizaini yakagadzika muGNOME 42
Sekutsanangura kunoita Mihkaylenko, zano nderekuita chimwe chinhu chakafanana nezvakaitwa mune yekutanga OS:
Pfungwa iyi yakanyanya kana kushoma yakafanana neyekutanga OS: kune sisitimu inodiwa, tri-state nemitengo: hapana-sarudzo, sarudza-rima, sarudza-mwenje. Ose ari matatu mazano. iwo maapplication akasununguka kuvatevera kana kwete, sezvakakodzera. Iko kusada-kusarudzika uye kusarudzika-kusviba kukosha kunoiswa pachena mukumisikidzwa, nepo kukosha-kwechiedza kukosha kuchichengeterwa kushandiswa mune ramangwana.
Pakati pezvinonyanya kufadza zvatinogona kuverenga muchinyorwa chaAlex tine mutsara uyu: «Kuve pane iyo portal zvakare zvinoreva kuti inowanikwa kune Flatpak maapplication pasina kuvhura chero sandbox maburi«, Izvo, mune mamwe mazwi, zvinoreva izvozvo ichashanda mune sandboxed application pasina nekudaro kurasikirwa nekuchengeteka. Iyo Snap uye AppImage mapakeji haana kutaurwa, asi iwo anogona kunge zvakare akatsigirwa neiyo inotevera GNOME 42 tweak.
GNOME 42 ichaburitswa munenge munaKurume 2022, uye mumwedzi mitanhatu iyi ticha svika pakuziva iyo yakasara yenhau iyo inotevera vhezheni yeakakurumbira desktop ichaunza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 42 ichaunza inovandudzwa tema tema iyo inoshanda kunyangwe mune flatpak kunyorera